IHuawei ayinakukwazi ukuthengisa iimveliso zayo eUnited States | I-Androidsis
IHuawei yenye yezona zinto zibalulekileyo emhlabeni. Intengiso yakho kunyuke kakhulu kwikota yokuqala yonyaka. Kwakhona, inkampani yenye yezona zibaluleke kakhulu eYurophu, apho sele benesabelo sentengiso se-20%. Ke imeko yayo kwintengiso intle. Ngaphandle kweMelika, intengiso apho bengazange bagqibe ukuphumelela. Kuya kufuneka songeze ubudlelwane obubi obukhoyo phakathi kwe China neMelika, kwaye babangela iingxaki kwifemu.
Uxinzelelo lwezopolitiko phakathi kwala mazwe mabini luyavuka kwakhona. Ngoku, uDonald Trump uphakamisa ukubakho thintela ukuthengiswa kwayo nayiphi na imveliso yeHuawei eUnited States. Isigqibo esinokuba neziphumo, nangona sibonwa njengophawu olungaphezulu kokuhamba ngokukuko.
Umongameli ulungiselela ukutyikitya umthetho, apho kuyakuthintelwa ukuba iinkampani zisebenzise iifowuni ezenziwe zezi nkampani zibeka umngcipheko kukhuseleko lwesizwe. Phakathi kwezi nkampani kukho iHuawei, ubuncinci phantsi kwamehlo eMelika. Indlela yokuthintela ubukho bayo elizweni.
Kwelinye icala, ayisosigqibo esichaphazela inkampani kakhulu. Ubukho bayo bunqunyelwe, ukuba abunqabile, eMelika. Inkampani uqobo ityhile ukuba ayisosigqibo sinempembelelo enkulu kwintengiso okanye kwimisebenzi. Ke abayichukumisi kakhulu.
U-Huawei ukwathi ukuthintela ishishini labo e-United States ayisiyonto eyenza ilizwe likhuseleke. Kwakhona, yinto onokuba nayo Impembelelo ezimbi ekuhanjisweni kwe5G eUnited States. Yinto enokudlala ngokuchasene nawe, njengoko inkampani ngokwayo isitsho kwingxelo.
Nangona bevela eMelika bayangqina ukuba sisigqibo esihle. Kodwa lo myalelo awusayiniwanga ngokusemthethweni okwangoku. Ke kuyakufuneka silinde iintsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba sazi ngakumbi ngayo. Ngelixa iHuawei ibonakala ingakhathazeki kwesi sigqibo senkampani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-United States inokukuthintela ukungena kweemveliso zeHuawei
I-MP ye-586 ye-Sony IMX48 iya kuba ngumlingiswa ophambili kwimodyuli yemifanekiso engasemva yeRedmi K20